Home Wararka Mid kamida saraakiisha hay’adda NISA Gash. Xamdi oo shaqada isaga tagtay. Sabab!
Mid kamida saraakiisha hay’adda NISA Gash. Xamdi oo shaqada isaga tagtay. Sabab!
Qoraal ay baahisay Taliyaha Hoggaanka baarista NISA Col. Xamdi Xasan Maxamuud ayey ku sheegtay inay shaqada ugu tagtay Taliyaha KMG ah ee Hey’adda NISA Yaasiin Fareey oo ay tilmaamtay inuusan ku shaqeyneyn nidaamka dalka u yaal, sidaasi darteedna ay xilka baneysay.
Xamdi Xasan ayaa qoraalka ay soo saartay waxa uu ku taariikheysan yahay March 4, 2022, hase ahaatee baaris ay sameeyeen qaar kamida warbaahinta madaxa banaan ayey ku ogaadeen in Col. Xamdi Xasan ay shaqeyneysay markii ay soo baxaysay warqada xil ka qaadista oo ku beegneyd Talaadadii.
Kulanka oo la sheegay inuu dhacay habeen hore ayaa ra’iisul wasaaraha uu kala hadlay Yaasiin Fareey sababta xil ka qaadista dhalisay, balse kama helin jawaab macquul ah. Xilka laga qaaday Col. Xamdi ayaa waxaa loo magacaabay Ibraahim Shiikhaal oo noqday Taliyaha Hoggaanka Baarista NISA, Taliyaha ilaalada shacabka ayaa waxaa loo magacaabay Iidoow halka Axmed Aadan loo magacaabay taliyaha ilaalada gaarka.
Previous articleXildhibaanada Barlamaanka Puntland oo ku goodiyay inay xilka ka qaadayaan MW Deni haddii uu isku sharxo Madaxweynaha Soomaaliya
Next articleSomaliland oo ka hortimid hubkii dalka Shiinuhu siiyay dowladda federaalka
Kullanka Heritage ma Daahin doonaa Doorashada & ma sii wadi doonaa...
Mareykanka oo sheegay in uu duqeyn ku dileen xubno ka tirsanaa...